Kuuriyada Waqooyi Oo Ogolaatay Iney Xidho Xarunteeda Gantaallada – somalilandtoday.com
Kuuriyada Waqooyi Oo Ogolaatay Iney Xidho Xarunteeda Gantaallada
(SLT-Pyongyang)-Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ogolaaday in la xiro mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn dalkiisa ee lagu sameeyo tijaabinta iyo howlgalinta gantaallada riddada dheer, sida uu sheegay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.
Ka dib markii ay ku kulmeen magaalada Pyongyang, labada hogaamiye “ayaa isku af gartay in la hirgaliyo barnaamijka burburinta hubka nuclear-ka,” waxaana sidaas xaqiijiyay Mr Moon.
Heshiiskaas ayuu Mr Kim isagana ku qeexay “tallaabo horay loo qaaday” oo ku aadan sidii nabad dhinaca milatariga ah looga abuuri lahaa gacanka Kuuriya.
Madaxweyne Kim ayaa sheegay inuu rajeynayo “booqasho uu ku tago magaalada Seoul” – haddii ay sidaas dhacdana wuxuu noqon doonaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee ka socda Waqooyiga Kuuriya oo booqda caasimadda Kuuriyada Koonfureed.
Natiijooyinkii ka soo baxay kulanka
1 .Burburinta hubka nuclear-ka
Qodobka ugu weyn ee kulanka diiradda lagu saaray ayaa ahaa bur burburinta nuclear-ka. Dhawaan markii ay dowladaha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi isku af garteen arrintaas, wada xaajoodyada ayaa hakad galay.
Xukuumadda Pyongyang ayaa hadda xaqiijisay iney mar kale diyaar u tahay dadaalkaas.
Mr Moon ayaa ku dhawaaqay in Mr Kim “uu ogolaaday in si buuxda loo xiro xarunta gantaallada ridada dheer lagu tijaabiyo ee uu yaallo matoorka hubkaas laga rido” waxaana arrinta muhiimka sii ah ay tahay “in tallaabadaas la qaadi doono xilli ay goob joog yihiin wakiillada ka socda dhinacyada ay howshaas quseyso”.
Wariyaha BBC-da ee ku sugan magaalada Seoul oo lagu magacaabo Laura Bicker ayaa sheegtay in go’aanka kormeereyaasha caalamiga ah loogu ogolaaday iney goob joog ka ahaadaan burburinta xaruntaas uu yahay tallaabo weyn oo horay loo qaaday.
Waxay intaas ku dartay in kormeereyaashu ay si madax bannaan ula socon doonaan howshaas.
Xarunta hubka lagu tijaabiyo oo loo yaqaanno Tongchang-ri ayaa Kuuriyada Waqooyi muhiim u ahayd tan iyo sannadkii 2012-kii, sida laga soo xigtay kooxda daba galka hubka.
Waxay sidoo kale ahayd meel loo adeegsado tijaabinta gantaallo gaari kara ilaa waddanka Mareykanka.
Hogaamiyaha kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale aqblay inuu burburiyo warshad la aaminsanyahay in lagu farsameeyo hubka wax gumaada iyo gantaallada la tijaabiyo.
Kuuriyada waqooyi ayaa howlgab ka dhigtay xaruntii ugu weyneyd ee ay khubaradeeda ku bacrimin jireen hubka nuclear-ka, wax yar ka hor inta uusan Mr Kim kulanka la qaadanin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juun.
“Natiijadaan ayaa guul weyn u ah madaxweyne Moon Jae-in, oo dhawaanahaanba warar fiican ka keenayay dhinaca Kuuriyada Waqooyi” sida uu BBC-da u sheegay Ankit Panda oo ah tifaftire dhanka Dublomaasiyadda ah.
2. Xiriirka labada Kuuriyo
Labada waddan ayaa sidoo kale isku waafaqay horumarro ku saabsan hagaajinta cilaqaadka ka dhexeeya, waxayna ballan qaadeen iney dib u habeyn ku sameyn doonaan waddooyin tareen oo isku xira labada dal.
Mr Moon ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku casuumay inuu booqdo magaalada Seoul, wuxuuna soo jeediyay in booqashadaas ay qabsoonto ka hor inta uusan dhammaanin sannadkaan.
Labada madaxweyne ayaa u xusul duubi doona sidii ay dalalkooda u wadaagi lahaayeen marti galinta ciyaaraha olombikada ee sannadka 2032-ka.
Wasiirka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed iyo taliyaha guud ee ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa dhinaca kale wada saxiixay heshiis lagu yareynayo xiisadaha milatariga, waxayna isku raaceen in la abuuro goob hubka ka caagan oo ku taalla xuduudda u dhaxeysa labada dal, si looga hor tago isku dhacyo kama’ ah.
Heshiiskaas ayaa la saxiixay intii lagu guda jiray saddexda maalmood ee uu Mr Moon booqashada taariikhiga ah ku joogay magaalada Pyongyang.
Maxay arrintaan uga dhigantahay Mareykanka?
Dadaallada ku saabsanaa burburinta nuclear-ka ee u dhexeeyay Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka ayaa cakirnaa in mudo ah, waxaana kulanka ka dhacay Piongyang uu waddada u xaarayaa dhex dhexaadinta Kuuriyada Koonfureed ee ku saabsan heshiis laga gaaro barnaamijkaas.
Mr Trump ayaa si deg ded ah bartiisa Twitter-ka ugu qoray hambalyadiisa ku aaddan kulanka dhex maray Moon iyo Kim.
Dhawaan ayay ahayd markii uu Mr Trump sheegay in isaga iyo Mr Kim ay caddeyn doonaan sida uu qof walba ugu khaldanyahay inuusan suurta gal ahayn heshiis iyo is af garad dhex mara labadooda.